Other News | Artist Khabar
Other News	गायक मिलन लामाले शुरु गरे उदाहरणीय कामः ‘बनको काफल बनकै चरीलाई’	माघ, पाल्पा । गायक मिलन लामा भन्ने बित्तिकै हामी केहि गीतहरु झल्यास्स सम्झन्छौं । 'माझि दाई पोखरा फेवा तालको', 'जुम्ला कालिकोटको' लगायतका गीतहरु एकसमय निकै चलेका गीत हुन् । त्यसोत यी गीतहरु अहिले पनि ठाउँठाउँमा गुन्जिरहेका हुन्छन् ।
सिने साईड डिजिटलले बजारमा ल्याएको भिडियोलाई सर्यु श्रेष्ठले नै निर्देशन गरेका हुन् । सुर्यकै शब्दमा रहेको सो गीतमा सनम पुरुषले संगीत भरेका छन् । यसभन्दा अघि दर्जनौं गीतहरुमा..	जाडोमा लगाउने बुटको कथा, किन आर्टिस्टको रोजाईमा छ ‘बुट’ ?	पुस, काठमाडौं । मौसम र आफ्नो पेशाअनुसार जुत्ता, चप्पल लगाउन खप्पिस युवतीहरू जाडो लागेसँगै न्यायो जुत्ता (बुट)मा आकर्षित हुन्छन् । चिसो मौसममा खुट्टालाई न्यानोपन दिन तथा स्टाइलिस्टका लागी पनि युवा युवतीको पहिलो रोजाइमा छ बुट । युरोपमा बढी फेसनमा चलेकोे बुट नेपाली बजारमा भित्रिएको करिब एक दशकमात्र भएको छ । छाटो समयमै शहरी क्षेत्रका..	माया गर्नेहरुका लागी टेक बहादुरले ल्याए ‘तिम्रै यादमा बाँचिराको छु’ (म्युजीक भिडियो)	पुस, काठमाडौं । नेपाली लोकगीतको बजार ठुलो छ । दिनहुँजसो लोक गीतहरु बजारमा आईरहेका पनि हुन्छन् । यसैक्रममा गायक टेक ब. सुनारको स्वरमा रहेको 'तिम्रै यादमा बाँचिराको छु' बोलको लोक गीत सार्वजनिक गरीएको छ ।
अम्मर सिंहले लेखेका शब्दहरुमा मायाका कुराहरु पाइन्छन्् । साथै गीतमा संगीतपनि अम्मरले नै भरेका छन् । परेली फिल्मस्को उत्पादन तथा बितरणमा..	५५ घर निर्माणका लागी धुर्मुस सुन्तलीले गरे मुसहर बस्ती शिलान्यास	धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनले बर्दिबास मा निर्माण गर्ने मुसहर बस्तीको शिलान्यास गरेको छ । सोमबार महजोडि सहित त्यहा पुगेका कलाकारको टोलीले ५५ घर निर्माणको शिलान्यास गरेका हुन् ।
फाउन्डेसनको शिलान्यास कार्यक्रममा पुगेका कलाकार महजोडीले एक लाख रकम सहयोग गर्ने घोषणा गरेका छन् । त्यस्तै उत्त अबसरमा कलाकार किरण केसीले १० हजार, पूर्व..	सलमानको मध्यरातको ट्विटको चर्चा, आखिर के थियो त्यस्तो ?	पुस, काठमाडौं । बलिउडका सुपरस्टार सलमान खान बेलाबखतमा चर्चामा आईरहन्छ । उनले बोलेका कुरा तथा गरेका कुराहरु बाट उनी चर्चामा आईरहेको पाइन्छ । कहिले जेलको कुरा त कहिले प्रेमको कुरामा चर्चा पाइरहेका सलमानको यतिखेर फेरी अर्को कुराको चर्चा चलेको छ ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुमा तथा सामाजिक सञ्जालमा यतिखेर सलमानले मध्यरातमा ट्विटरमा ट्विट..	चर्चित अभिनेता ओम पुरीको ह्दयघातको कारण निधन	पुस, मुम्बई । बलिउडका चर्चित अभिनेता ओम पुरीको शुक्रवार बिहान ह्दयघातको कारण निधन भएको छ । ६६ बर्षिय पुरीको मुम्बईमा निधन भएको हो ।
पुरीले १९७६ मा पुणे फिल्म संस्थानवाट प्रशिक्षण लिएका थिए । सन १९७६ मा मराठी चलचित्रवाट घासीराम कोतवालवाट करिअर..	Pages:1234567...40»
Recent Posts	पुरानै कलाकारहरुको प्रेरणाबाट आएका हौं हामी: नवगायक भरत परियार